Umbutho i-International Budget Partnership South Africa uzibandakanye kwiphulo i-Asivikelane nelijolise ekusiweni kweenkonzo kwiindawo zogobityholo kwilizwe loMzantsi Afrika. Kungokunje lombutho ufake imbalelwano ngemiba onqwenela ukuba iqukwe kwisabelo mali soomasipala esisaqulunqwayo(draft budget), nabaquka oomasipala abambhaxa abaquka umasipala wesixeko saseTshwane, owesixeko saseKapa, Ethekwini, isixeko saseRhawutini kunye neNelson Mandela Bay. Oku kusemva kokuba lo mbutho ufumanise ukuba abamasipala abakhange babekele bucala imali yokuphuculwa kothungelwano lweziseko ezifana neempompo zamanzi kunye nezindlu zangasese kuhlahlo mali olusaqulunqwayo luka2021/ 2022.
Singabona imithetho yelizwe loMzantsi Afrika ephathelene nemitshato ivumela amanina atshate amadoda amabini nangaphezulu, nanjengoko amadoda ekwazi ukwenza oko. Oko kungenzeka nanjengoko kukho isiphakamiso esifuna oko kuvumeleke kwimithetho ejongene nemitshato. Kutsha nje isebe lemicimbi yekhaya lipapashe umqulu womgaqo nkqubo ongamaphepa angamashumi amathandathu anesixhenxe ophathelene noku. Eli sebe livakalise ukuba kulo mqulu lifuna ukuqulunqa umthetho omtsha ongemitshato, nozakuvumela ukuba yonke imitshato ithathelwe ingqalelo, kwaye ibe semthethweni. Oku kuza ngethuba eminye imitshato ingathathelwa ngqalelo kweli, kwelinye icala imithetho ekhoyo kungokunje ibonwa njengesilelayo ukuphakamisa umakulingwane
ZYK-LIVE THIRD WAVE
Isebe lempilo lithi lixhalabile kukwanda kwenani labantu abosulelwa yiCovid 19 kweli lizwe. Lithi okokuqala eva kwexesha elide, inani lokosuleleka kwabantu liqabele ngaphaya kwamawaka amabini kwisithuba seeyure ezingamashumi amabini anesine izolo. Isebe linike inkcazelo kwikomiti yasePalamente kwezempilo, ngezicwangciso zalo zomsebenzi wonyaka.Kusenjalo, iphondo laseGauteng libhalise ukonyuka kwamanani abantu abosuleleke yiCovid-19, nalapho lamanani ephindeke kabini kuleveki kuphela. Kuchazwa ukuba iindibano zamakhaya nezenkolo zinegalelo ekonyukeni kwala manani, uquka nokungayithobeli imiqathango emiselweyo ukunqanda ukunwenwa kwale ntsholongwane. Ukanti, iziko elijongene nezifo ezosulelayo eMzantsi Afrika, i-NICD, likhuphe ingxelo yalo yakutshanje ngentsholongwane iCovid-19 liqwalasele indlela esingonyuka ngayo isantya sokusasazeka kwale ntsholongwane kwezinyanga zizayo, nento enokufaka eli lizwe kumsinga wesithathu we-Covid-19.Ukuncokola banzi ngoku emnxebeni sibambe ugqirha Monwabisi Boqwana...
Ikomiti ejongene nophuhliso loluntu ePalamente ibambe inkqubo yokuphulwaphulwa kwezimvo zoluntu malunga nomthetho-sihlomelo oyilwayo, nogxile kubantwana. Lo mthetho uyilwayo ugxile ekuphuculeni umba wokhuseleko lwabantwana. Umba ovezwe ngabathathi nxaxheba phambi kwale komiti, yimingeni ejongene namaziko ophuhliso lwabantwana i- Early Childhood Development (ECD), ingakumbi ezo zisemaphandleni. Ukanti abantwana abakhulela kwindlala nentlupheko, kuvame ukuba bachwethelwe bucala luluntu (Social exclusion), ntoleyo ekhokhelela ekubeni babeneengxaki zempilo ekuhambeni kwexesha, bekwasokola nokuphuhla ngokwaneleyo kwizigaba zobomi. Umgaqo siseko weli waqulunqwa ukukhusela wonke ubani, kuquka nabantwana. Kuqikelelwa ukuba mnye kubantwana abahlanu ophila ngaphandle kwabazali; ukanti ngumyinge we 64.5% ohlala kumakhaya anemivuzo ephantsi (low income-households).
ZIBUZWA - INTERNATIONAL NURSES DAY
Namhlanje kuphawulwa usuku lwamanesi kwihlabathi liphela. Olu suku luza kanye nanjengoko intsholongwane iCovid-19 ithe yagqamisa indima edlalwa ngamanesi ukusindisa imiphefumlo yoluntu. Ingqonyela yebhunga lamanesi oMzantsi Afrika, uSizeni Mchunu, ithi susela kunyaka ophelileyo amanesi aye ajongana nemingeni emininzi, kuquka ukuphangela iiyure ezigqithisileyo behoyana nenani eliphezulu lezigulane ezingeniswa kwizibhedlele. Amanye amanesi adla umhlala-phantsi akhethe ukubeka ubomi bawo emngciphekweni ngokuthi abuyele enkomeni ukusindisa eli lizwe. Masiphulaphule kudliwano-ndlebe nasi isithethi se DENOSA kuzwe uSibongiseni Delihlazo.. kudliwano-ndlebe nenkqubo ndaba yasemini no Siphosethu Nonganga .
Singabona imithetho yelizwe loMzantsi Afrika ephathelene nemitshato ivumela amanina etshata indoda enye nangaphezulu, ngokufanayo namadoda akwaziyo ukwenza oko. Oku kungenzeka nanjengoko kukho isiphakamiso esifuna oko kuvumeleke kwimithetho ejongene nemitshato. Kutsha nje, isebe lemicimbi yekhaya lipapashe umqulu womgaqo nkqubo ongamaphepha angamashumi amathandathu anesixhenxe ophathelene noku. Eli sebe livakalise ukuba kulo mqulu lifuna ukulunqa umthetho omtsha ongemitshato, ozakuvumela ukuba yonke imitshato ithathelwe ingqalelo kwaye ibe semthethweni. Oku kuza ngethuba eminye imitshato ingathathelwa ngqalelo kweli, logama kwelinye icala imithetho ekhoyo kungokunje ibonwa njengesilelayo ukuphakamisa ukulingana.
Intro: Ikomiti yasepalamente ejongene nenkcitho karhulumente i-SCOPA, kuleveki ityelele oomasipala abaliqela bephondo leMpuma Koloni abaquka umasipala osezingxakini wesithili i-Amathole, kwakunye nomasipala i-OR Tambo, nabanye abaliqela. Ngethuba lolutyelelo kumasipala iOR Tambo, i-Scopa yothukile kukufumana ingxelo engomaspala ngethuba kanye lentlanganiso. I-SCOPA ibuza kusodolophu, ixelelwe ukuba usodolophu uyifumene ngentsasa yentlanganiso leyo ingxelo. Ukanti kumaspala wesithili i-Amathole iScopa sixelelwe ukuba asikenziwa isicwangciso sokuvuselela isimo semali kulomaspala, nangona ngoko mthetho sele ligqithile ixesha lentsuku ezingamashumi alithoba ebelimiselwe ukulungisa izinto. Kumasipala iEnoch Mgijima kusezakwenziwa uphando ngakumbi malunga nabanikezeli beenkonzo abahlawulwa umyinge wamashumi amabini anesihlanu ekhulwini kwimali efunyanwa kwabenkonzo zerhafu, ntoleyo ethandabuzisayo ngenkonzo ezinikezelwa ngababantu nebangela ukuba bahlawulwe kangaka.
Kubonakala zingahambeli phambili iinzame zokwenza iinguqu kwiziko lophengululo ncwadi zemali, i-South African Institute of Chartered Accountants, i-SAICA ngamafuphi, nanjengoko liqhuba ngokudodobala iqondo labafundi abantsundu abaphumelela iimviwo zokuvavanyelwa ubuchule nesakhono sokwenza umsebenzi wokuphengulula iincwadi zemali, i-Assessment of Professional Competence, i-APC ngamafuphi. Kwiziphumo zakutsha nje zezi mviwo, i-SAICA ibhengeze ukuba ngumyinge wamashumi amabini anesine ekhulwini (24%) kuphela wabafundi abaNtsundu abaphumelele ezi mviwo xa kuthelekiswa nomyinge wamashumi amathandathu anesine ekhulwini (64%) wabafundi abaMhlophe. Kodwa lo ayinguwo wodwa umba oxhalabisayo; kubafundi abangaphaya kwamashumi amane anesibhozo amawaka ababhaliswe njengabaphengululi zincwadi ngokusesikweni kweli, umyinge ka-14.8% ngabantu abaNtsundu, logama umyinge ka-67.6 % ingabantu abaMhlophe. Kungesosizathu i-SAICA ivakalise ukuba izakuqhuba uphando malunga nezizathu zokuba abafundi abantsundu baqhube nokutshona oluvavanyo, ntoleyo ebonwa njenge ndlela yokuvimba abantu abaNtsundu amathuba okwenza lomsebenzi wophengululo zincwadi.
ZYK-LIVE WORKERS DAY
Abasebenzi jikelele kwihlabathi balungiselela ukuphawula usuku lwabasebenzi namhlanje. Ukanti kulonyaka kokwesibini kuphawula usuku lwabasebenzi susela ukuqhambuka kwentsholongwane i- Corona, nalapho kwamiswa ngxi uqoqosho lweli, ngenjongo zokunqanda usuleleko lwentsholongwane kwaye oku kukhokhelele ekubeni abasebenzi abaninzi baphulukane nemisebenzi yabo. Nangona imiqathango ye lockdown inyenyisiwe, imibutho yabasebenzi ithi kusekude ukuba inkampani eziliqela zivuseleleke... Ukuncokola banzi noku emnxebeni sibambe unobhala wemnyano yabasebenzi i- SAFTU uZwelinzima Vavi, isithethi semanyano sabasebenzi- i- COSATU uSizwe Pamla kunye nothethela imanyano yabasebenzi i- FEDUSA uFrank Nxumalo...
Nanjengoko inyanga kaMay iyinyanga eqwalasela amalungelo abasebenzi, ikwakhumbula kwaye inika ingqwalasela kwindima yemibutho yabasebenzi kunye nendima eyayenzayo ukulwa urhulumente wengcinezelo. Kutsha nje zide zamiswa iingxoxo ezingemiba yabasebenzi neziquka kuzo, ukonyuswa kwemivuzo, nalapho urhulumente ebebeka etafileni ukonyuswa kwemivuzo phantsi kwemiqathango equka abasebenzi baphulukane namaqithiqithi abo athile. Iimanyano zabasebenzi bakarhulumente zikukhabile oku, nangona kunjalo, kungokunje zikulungele ukubuyela kwisithebe seengxoxo.
ZIBUZWA - NUMSA ESKOM
Iimanyano zabasebenzi, iNUMSA, iNUM kunye neSolidarity, zidakance izinyanzeliso zazo zokonyuswa kwemivuzo liqumrhu eliphehla umbane uEskom kumjikelo wokuqala weengxoxo kwiziko lembambano ngemivuzo. Izinyanzeliso zabo ziquka ukonyuswa kwemivuzo ngomyinge weshumi elinesihlanu ekhulwini (15%). Izivumelwano zemvuzo ekwakuvunyelenwe ngazo ngaphambili, zifikelela esiphelweni ngomhla wamashumi amathathu ku-June. Isithethi se-NUMSA, uPhakamile Hlubi-Majola, sithi iziphathamandla zakwa-Eskom ziyafeda ukubuyisela uzinzo kweli qumrhu, esithi uMzantsi Afrika ujongene nengxaki kacimi-cimi ntoleyo echaphazela ngakumbi uluntu. Phulaphula kusihlalo we-NUMSA kuzwelonke kwimiba yakwa-Eskom, uKhaya Gwana...
ZIBUZWA - HOUSING SUBSIDY
Isebe lokuzinziswa koluntu, amanzi nogutyulo limemelela kubantu abathenga izindlu okokuqala ukuba bafake izicelo zokufumana inkxaso karhulumente. Eli sebe likhuthaza abantu abafumana imivuzo ephakathi kwamawaka amathathu anesihlanu ukuya kumawaka angamashumi amabini anesibini erandi ngenyanga, ukuba bafake izicelo. Phulaphula ingcaciso epheleleyo kwigosa eliphezulu eliphuma kwelisebe uJabulani Fakazi